BREAKING NEWS:- Dowladda Puntland oo sharci darro ku tilmaamay lacago dowladda federalka ku wareejinayso maamulka Hargeysa. | puntlandi.com
BREAKING NEWS:- Dowladda Puntland oo sharci darro ku tilmaamay lacago dowladda federalka ku wareejinayso maamulka Hargeysa.
Dowladda Puntland ayaa sheegtay inaan sifo aan sharci ahayn loo maray lacag hal malyan ah oo dowladda federalka Soomaaliya ku wareejinayso maamulka Hargeysa, taasoo lagu sheegay in wax looga qabanayo dhibaatadii ka dhalatay duufaanadii ku dhuftay waqooyiga Soomaaliya.
Wasiirka arrimaha gudaha Puntland, Cabdulaahi Cali Xirsi Timacadde oo goor dhowayd shir jaraa’id saxaafada ugu qabtay Garowe ayaa cambaareeyay lacagtaan isagoo sheegay in loogu talo galay in Muuse Biixi hub loogu iibiyo islamarkaana lagu huriyo colaada ka taagan Sool.
Timacadde ayaa sheegay dowladda Puntland in aysan kasoo horjeedin in shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan waqooyiga Soomaaliya lacagtaas wax loogu qabto, balse ay ka walaacsan yihiin in loo adeegsado arrimo siyaasadeed iyo abaabul colaadeed.
Waxaa kale oo uu wasiirku sheegay in dowladda federalka looga baahnaa inay gurmadkaas lacageed u wakiilato culimada ama Isimada, laakiin haatan ay muuqato in si toos ah jeebka loogu shubay Muuse Biixi iyo maamulkiisa, wixiina ka dhacana ay masuul ka tahay dowladda federalka.
Goor dhow la socda shirka jaraa’id iyo faafhfahin dhameystiran.